Shirkadda Guul Group Oo Hargeysa Ku Soo Bandhigtay Maalgalin Aan Amaah Lahayn | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Shirkadda Guul Group Oo Hargeysa Ku Soo Bandhigtay Maalgalin Aan Amaah Lahayn
Hargeysa (SDWO): Kulan lagu daah-furayay fursaddo maalineed oo loogu tala-galay in lagu taageero ganacsatadda bilowga ah iyo dadka hal-abuurka leh ee haya figraddo shaqaynaya oo gacansi ayaa maanta lagu qabtay Hargeysa.
Maasibaddan oo maanta lagu qabtay Ambassador Hotel waxaa qaban-qaabisay Shirkadda Guul Group oo ka Wakiil ah Maalqabeen reer Nayjeeriya ah oo lagu magacaabo Tony Elumelu oo bilaabay inuu Boqol Milyan oo Doollar kor ugu soo qaado dadka u baahan taageeradda ee Afrika.
Waxaana ka qayb-galay masuuliyiin ka kala socotay Inta badan laamaha dawladda Somaliland iyo Gacansatadda taageerrta maalgalinta iyo dadweyne danaynayay fursaddan.
Guddoomiyaha Shirkadda Guul Gourp Guuleed Haaruun Ibraahim oo sharaxaad ka bixiyay ujeedada munaasibadan ayaa tilmaamay in ay doonayaan inay ummaddoodda ka qayb-geliyaan maalgalintan oo wax-tar u leh dhaqaalaha waddanka iyo shaqo abuurkaba.
Waxaanu yidhi “Waxaanu ugu baaqaynaa qof kasta oo haya figrad ganacsi oo cusub oo u doonaya maalgelin ama gacasi kooban haysta inuu ka faa’iidaysto oo uu toos ulla xidhiidho Tony Elumelu Foundation oo doonaya in dadka Afrikaanka ahi cagahooda isku taagan. qofkii u baahda in aanu xidhiidka ka caawinnana xarunta Shirkadda Guul Group ha noogu yimaado”.
Waxaana uu intaas ku daray in ugu yaraan loo baahan yahay 1000 ruux oo keena figraddo wanaagsan oo lagu siiyo maal-gelin iyo tababaro wixii ka dhiman, si taasi u suurta-gashana qof walba laga rabbo inuu u dirto shirkaddan hindisihiisa si loo taageero.
Isagoo agaasimihu mahadnaq u jeediyay, masuuliyiinta ka qaybgashay iyo shirkaddaha taageeray kulankan oo ay ugu horeeyaan shirkadda Telesom, Premier Bank, KMC iyo Buubaal Business Center.
Axmed Muxumed Geelle oo isna ku xigeen ka ah Hay’adda ka hortagista aafooyinka dabiiciga ah iyo Kaydka Qaranka ayaa tilmaamay in fursadani faa’iido u tahay dadka abaaraha saddex jirka ahi hayaan. “Waa fursad ay ka faa’iidaysan karaan dadka xooluhu ka baxeen oo ay ku noqon karaan ganacsato” Ayuu yidhi guddoomiye ku xigeenka hay’adda NERAD.